UBushiri uMphrofethi obalekela umthetho | Scrolla Izindaba
UBushiri uMphrofethi obalekela umthetho
Ungumphrofethi wase-Malawi ocebe kakhulu futhi mhlawumbe uyena kuphela ongusaziwayo kakhulu ezweni lakubo.
Kodwa esikhundleni sokuthi izifuba zabo zigcwale ngokuziqhenya ngaye, abantu base-Malawi abaningi bathukile ukuzwa ukuthi yini uMphrofethi uShepherd Huxley Bushiri, ongumshumayeli onekhono ohola ibandla le-evangelical Enlightened Christian Gathering, asolwa ngakho.
Ngaphambi kokuthi aphunyuke ngebheyili yezigidi ezingama-R400,000 futhi wabaleka eNingizimu Afrika ngoLwezi nomkakhe uMary, uBushiri wabekwa icala lokukhwabanisa, ukweba, inkohlakalo kanye nokukhwabanisa imali okususelwa ohlelweni lokutshala imali eyizigidi ezingama-R102.
Kusukela lapho abashushisi abafuna ukubuyisa uBushiri oneminyaka engama-37 ubudala batshele uhulumeni waseMalawi ngamanye amacala ahlanganisa nezinsolo zokudlwengulwa kwamantombazane aneminyaka eyi-16 ubudala.
Impela uBushiri uphumelele ekwenzeni isilima uhlelo lwezobulungiswa lwaseNingizimu Afrika.
Wonke umuntu uthe, uzophunyuka uma enikezwa ibheyili.
INkantolo eNkulu yaqhubeka yamnikeza ibheyili.
Ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kwalokho weqa imithetho yebheyili waya e-Malawi futhi yize kukhona konke ukungqubuzana nokuzikhukhumeza okuvela kuziphathimandla zaseNingizimu Afrika, iqiniso lokuthi ngubani owasiza uBushiri ukuthi abaleke, lisalokhu likhona.
UBushiri uthi, ushushiswe ngaphandle kokuthethwa kwecala yiziphathimandla zaseNingizimu Afrika kusukela ngowezi-2015.
Imizamo yokumbuyisa e-Malawi kulindeleke ukuthi iqhubeke kuze kube ngowezi-2021 kodwa i-NPA ithole isiqinisekiso kuhulumeni wase-Malawi ukuthi izosiza ekuqinisekiseni ukuthi uBushiri liyaqulwa icala lakhe.